जे गर्दा पनि चाँया गएन् ? यी उपाय अपनाउनुहोस् – Jagaran Nepal
जे गर्दा पनि चाँया गएन् ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
काठमाडौँ । कपालमा चाँया पर्ने समस्याबाट धेरैजना पीडित हुने गर्छन् । टाउकोमा चाँया परेपछि अनुहार, घाँटी र कपडामा समेत देखिन थाल्छ । जसले गर्दा मानिसहरु निकै समस्यामा पर्ने गर्छन् ।
बिरे नुन (कालो नुन) को प्रयोग गर्दा चाँया कम हुन्छ । जाडो र गर्मी दुवै मौसममा चाँयाको समस्या आउँछ भने कालो नुनको प्रयोग फाइदाजनक हुन्छ। कपाललाई हल्का मनतातो पानीमा पखाल्ने र कालो नुन हातमा लिएर कपालमा मसाज गर्ने त्यसपछि तौलियाले बेरेर पाँच मिनेट राखेपछि स्याम्पुले धुने । यो प्रक्रिया केही हप्तासम्म दोहोर्याएमा चाँया हराउँदै जान्छ।